Maxuu yahay Mooshinka loo gudbiyey guddoomiyaha Golaha Shacabka? – Hornafrik Media Network
Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu shalay qabtay mooshin soo jeedin ah oo ku saabsan maqaamka gobolka Banaadir, oo aan wali dowladihii dalka soo maray ka helin metelaad maamul oo ku yimaada rabitaanka shacabka ku nool.
Sida aan wararka ku helnay in ka badan 150 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka isla markaana uu hor boodayo Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble ayaa saxiixay mooshinkan una gudbiyey guddoomiye Maxamed Mursal oo isna ka qabtay.
Mudooyinkii u dambeeyay xildhibaano dhawr ah ayaa bilaabay dardar galinta ola-ole maqaam loogu raadinayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Dooda mooshinkan ayaa lagu wadaa in maalmaha nasoo aadan ay ka bilaabato kulamada baarlamaanka Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in dood kadib sharci gaar ah laga soo saaro.
Madaxda maamulka Muqdisho ayaa lagu magacaabaa digreeto Madaxweyne, metelaad sax ahna kuma lahan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxayna dadka reer Muqdisho sanadihii lasoo dhaafay dalbanayeen in la cadeeyo metelaada gobolka Banaadir, taas oo aan wali suurta galin.
Labada Gole ee BF oo wadajir u meel mariyey miisaaniyadda sanadka ay saacaduhu naga xigaan